कोरोनाले बिथाेलिँदै समाज
नवराज कुँवर काठमाडाैं, १० असार
यही ७ असारमा खानेपानीको धारामा कोरोना संक्रमितलाई लक्षित गरी छाडिएको करेन्ट लागेर डाटीको आदर्श गाउँपालिका–७ की २५ वर्षीया तुलसी बागको मृत्यु भयो ।
घरनजिकै रहेको धारामा कोरोना संक्रमित आउन सक्ने भन्दै स्थानीय १८ वर्षीय सुरज किमाडीले पानी ट्याङ्कीमा विद्युतको तार जोडेर करेन्ट छाडेका थिए । पानी भर्न खोज्दा तुलसीलाई करेन्ट लाग्यो । यसरी कसैको भूल र मूर्ख्याइँले २५ वर्षीया युवतीको जीवन सिध्यायो ।
गत १ चैतमा साउदी अरबबाट घर फर्किएका भोजपुर हतुवागढीका उपेन्द्र राईमा वैशाख पहिलो साता कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पुष्टि भयो । १६ दिन विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेपछि उनी निको भए ।
तर, यो अवधिमा उनले थुप्रै मानसिक तनाव झेल्नुपर्‍यो । आफू अस्पतालमा रहँदा श्रीमतीले छिमेकीबाट असाध्यै नराम्रा वचन सुन्नु परेको उनी सुनाउँछन् । ‘सुरूमा थाहा पाएको भए त्यस्तालाई बन्चरोले हानेर बाटोमै मारिदिन्थ्यौँ भन्थे रे । कसैले क्यान्सर भयो अब बाँच्दैन भनेर भविष्यवाणी गरिदिए, कसैले टिबी भयो पनि भनेछन्’, उनले सम्झिए ।
निको भएर पनि लामो समयसम्म आफूमाथि प्रहार भएको वचनवाणले उनलाई बिझाइरहन्थ्यो । त्यसैले केही दिन उनी छरछिमेकसँग बोलेनन् । ‘मलाई लक्षण थिएन तर रिपोर्ट पोजिटिभ आयो । १६ दिनपछि म यतिकै निको पनि भएँ । यति सामान्य रोगलाई लिएर समाजमा यत्रो ठूलो विभाजन र वितृष्णा पैदा भएको कुराले म छक्क परेको छु । मजस्तै समाजबाट तिरस्कार झेल्नुपरेका कति होलान् हाम्रो देशमा ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।
वैशाख पहिलो साताको कुरा हो । कोरोना भाइरसको बहाना बनाएर कीर्तिपुर–१० का स्थायी बासिन्दा गणेशमान महर्जनले ९ महिनाकी गर्भवती देवी शर्मालाई डेराबाट निकालिदिए । बागलुङ जैमिनी नगरपालिकाकी देवीका पति बैकुन्ठ शर्मा जाजरकोटमा अध्यापन गराउँछन् ।
काठमाडौंमा आउँदाजाँदा बस्नुपर्ने भएकाले शर्माले कीर्तिपुरमा पनि डेरा लिएका थिए । कीर्तिपुर आउनुअघि देवी जाजरकोटमा पतिसँगै बस्थिन् । जाजरकोटबाट आएकाले कोरोना संक्रमण हुनसक्ने भन्दै घरधनी महर्जनले गर्भवती देवीसहित उनका पति र सानो बालकलाई डेराबाट निकालेर ढोकामा ताला लगाइदिए ।
यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्, समाजमा कोरोना संक्रमित, तिनका परिवार तथा विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिमाथि असाध्यै अमानवीय व्यवहार भइरहेको छ ।
नेपाली समाजमा एउटा बाहिरबाट फर्किएका र अर्को स्थानीयस्तरमै बसिरहेका गरी २ वटा समूह देख्न थालिएको छ । स्थानीयस्तरमै बसोबास गरिरहेकाले विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई बाटोमा काँडेतार लगाउने, गाउँ छिर्न नदिने, छिरे पनि भेटघाट नगर्ने, सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश निषेध गर्नेजस्ता हर्कत भइरहेका छन् ।
संक्रमण जितेका सञ्चारकर्मी भन्छन्,'काेराेनाभन्दा भयङ्कर समाजकाे व्यवहार'
विगतमा एचआइभी संक्रमितहरूलाई गरिए जस्तै दुर्व्यवहार कोरोना संक्रमित वा संक्रमण हुन सक्ने सम्भाव्य क्षेत्रबाट फर्किएकाहरूले भोग्नु परेको छ ।
कोरोना भाइरसको त्रासले सामाजिक एकता र सद्भावको वातावरणमाथि निर्मम प्रहार गरेको छ, जुन अत्यन्तै चिन्तातुर विषय हो । कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थला त पार्‍यो नै, समाजसमेत भाँडिदिएको छ ।
कोरोनाविरुद्ध फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकारलगायतले समाजमा दुर्व्यवहार खेप्नुपरेको छ । क्वारेन्टाइनमा बसेकामाथि भइरहेको अमानवीय व्यवहारको फेहरिस्त झन् कहालिलाग्दो छ ।
कुखुरालाई चारो फालेजस्तो विस्कुट फालिदिने, बाटोमा चिया राखिदिने, डरत्रास देखाउने, आक्रमण गर्नेजस्ता दुर्व्यवहार क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमाथि भइरहेको छ ।
संक्रमितको अवस्था त झनै टीठलाग्दो छ । नेपालमा कतिपय संक्रमितले निको भइसकेपछि पनि छरछिमेकी, आफन्तबाट छिछि दूरदूरको सामना गर्नुपरिरहेको कुरा भोजपुरका उपेन्द्र राईमाथि भएको तीतो अनुभवले स्पष्ट पार्छ ।
विश्वको सन्दर्भमा केही दिनयता कोरोना भाइरसका विषयमा राहत मिल्ने खालका विवरण सार्वजनिक भए पनि नेपालजस्तो देशमा भइरहेको उद्विग्नताको अन्त्य सजिलै हुने देखिँदैन । आज पनि संक्रमितमाथि अमानवीय व्यवहार रोकिएको छैन । परिणामस्वरुप संक्रमितमा मानसिक तनावसँगै आत्महत्या गर्नेसम्मको दुर्भाव उत्पन्न हुने खतरा बढेको छ ।
एकातिर रोग लागेको चिन्ता, अर्कातिर सामाजिक अवहेलना । ‘सेयरकास्ट इनिसियटिभ नेपाल’ले गरेको एउटा अध्ययनले मानिसमा कोरोना संक्रमण र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण बेचैनी, डर, चिन्ता, उदासिनता र दिक्दारी बढेको देखाएको छ ।
अध्ययनमा समेटिएका १५ सय ७ जनामध्ये ४२ प्रतिशतलाई कम्तीमा एउटा र २६ प्रतिशतलाई २ वा त्योभन्दा धेरै मनोसामाजिक समस्या रहेको पाइएको थियो । यस्तै २० प्रतिशतले बेचैनी भएको बताए पनि अरुमा भने डर, चिन्ता र उदासिनता बढेको पाइएको छ । यसबाहेक बालबालिकामा समेत कोरोनाको भयले ठूलो असर पारेको देखिन्छ ।
काेराेना त्रासले बालबालिकामा गम्भीर असर
नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि कोरोना कहर झनै पेचिलो र बोझिलो बन्न पुगेको छ । अर्थव्यवस्था त विस्तारै पुनःउत्थान गर्न सकिएला तर समाज भाँडिनु, सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्नुले चिन्ता बढाएको समाजशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
समाजशास्त्री दीपेश घिमिरे कोरोना भाइरसले समाजमा बहुयामिक असर पारेको बताउँछन् । स्थानअनुसार यसको असर फरक–फरक हुन सक्छ । उनका अनुसार समाज, त्यसभित्रको सामाजिक बनोट, सम्बन्ध, सञ्जाल, चेतना, बुझाइ, राज्य तथा सरकारको उपस्थिति, त्यसमाथि नागरिकको विश्वासको अवस्थालगायतका सवालले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । नेपाली समाजमा कोरोना संक्रमित हुनु नै सामाजिक अपराधको रूपमा लिने गरिएको छ । कतिपय समाजमा यसलाई सामान्य संक्रमणको रूपमा लिने गरिएको छ ।
अमेरिकामा रहेका समाजशास्त्री घिमिरे भन्छन्, ‘पश्चिमा देश खासगरी अमेरिकामा यस्तो देखिँदैन । एक त अमेरिका पहिलादेखि नै व्यक्तिवादी समाज हो, जहाँ छरछिमेकमा समेत सामाजिक सम्बन्ध निकै कम हुन्छ । अमेरिकामा साथीसर्कल र चर्चमा मात्रै परिवारबाहेकका व्यक्ति भेटिन्छन । अन्यथा यहाँ आफ्नो परिवारभन्दा बाहिर सम्बन्ध र सम्पर्क निकै कम मात्र हुन्छ ।’
अमेरिकामा बढी मानिसहरूको भीड हुने सुपरमार्केट, बजारमा सामाजिक दूरी राखिएको छ । हरेक स्थानमा हेण्ड स्यानिटाइजर छ । ‘कोरोनापछि मानिसहरू सामान्य जीवनमा फर्किइसकेका छन् । यस्तो समाजमा पहिला पनि खासै बलियो सामाजिक एकता नभएकोले हुन सक्छ, कोरोनाले यो समाजको एकता र सद्भावमा खासै असर पारेको देखिँदैन’, उनी भन्छन् ।
समाजशास्त्री डा. रामहरि ढकाल बलियो सामाजिक एकता र सद्भाव भएका नेपालजस्ता मुलुकमा कोरोना र यसपछि उत्पन्न परिस्थितिले ठूलो असर पुर्‍याएको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालको सन्दर्भमा कोरोनाबाट आर्थिकसँगै सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष बढी प्रभावित भएका छन् । ‘आफन्त वा नजिकका कोही बिरामी हुँदा अस्पताल जाने संस्कृति थियो, आज त्यो रहेन । कोही मर्दा महत्त्वपूर्ण काम छोडेर भए पनि मलामी जाने चलन थियो, त्यो पनि रहेन । विदेशबाट आउनेलाई स्वागत गरिन्थ्यो, खुसी साटिन्थ्यो, त्यो त झनै रहेन’, डा. ढकाल भन्छन्, ‘सामाजिक असर त झन् डरलाग्दो देखिन्छ । विदेशबाट फर्किएका तथा कोरोना संक्रमितमाथिको उपेक्षा बिर्सनलायक छ ।’
समाज यसरी किन भाँडियो त ? कोरोनाको यस खालको डर कसरी पैदा भयो ?
समाजशास्त्री घिमिरे यसको पछाडीका केही कारण औँल्याउँदै भन्छन्, ’पहिलो त नेपाल र भारतका आम सञ्चारमाध्यमले कोरोना भाइरसको बारेमा प्रवाह गरिरहेका सूचना बढाइचढाइपूर्ण छन् । दोस्रो, हाम्रो राज्य संयन्त्रमाथि नागरिकको भरोसा कम छ । राज्य संयन्त्रले जे भने पनि नागरिकले पत्याउँदैनन् । बरु फेसबुके र ट्विटरेका कुरा पत्याउँछन् । तेस्रो, शैक्षिक तथा चेतनास्तरले पनि फरक पारेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा हाम्रोजस्तो बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुधार्मिक देशहरू परेका छन् ।’
समाजशास्त्री ढकाल पनि यसमा सहमत छन् कि अफवाहपूर्ण, अर्धसत्य सूचना र जानकारी नै आममानिसको धारणा बन्नु प्रमुख कारण हो । ‘चौधौं शदाब्दिताका ब्ल्याक डेथबाट संसारको एक चौथाइ मान्छे मरेका थिए । सुरूमा कोरोनालाई झण्डै त्यसैसँग तुलना गरियो । एक त सरुवा रोग, त्यसमाथि करोडौं मान्छे मर्ने अनुमानबाजी, मिडियामा आउने अतिरञ्जित सामाग्रीले समाजमा जुन असर पारेको छ, त्यो निमिट्यान्न हुन समय लाग्न सक्छ । सरकार यसप्रति बेलैमा चनाखो हुनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।
कोरोना भाइरस (कोविड–१९) बाट संसार हावाकावा भएको ७ महिना भयो । अहिलेसम्म झण्डै १ करोड मानिस संक्रमित भएका छन् । यीमध्ये ४ लाख ७८ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको बताइएको छ । तर, ५० लाखभन्दा बढी मानिस निको भइसकेका छन् । त्यसो त, संक्रमितमध्ये धेरैलाई साधारण लक्षणसमेत देखिएको छैन । यसबाहेक पछिल्लो समय कोरोना र यसको असरलाई लिएर राहत मिल्ने खालका विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
विश्वका एक दर्जनभन्दा बढी देशले कोरोनालाई जितेर अर्थतन्त्र र जनजीवन सामान्य पारिसकेका छन् । आइसल्याण्ड, स्लोभेनिया, न्यूजिल्याण्ड, मोरिसस, ब्रुनेई, कम्बोडियालगायतका देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ अंकमा सीमित भएको छ । बेलायत पनि लकडाउनबाट रेस्ट लिने चरणमा पुगेको छ । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले ४ जुलाइपछि सिनेमा हल, होटल, पब, बारलगायत खोल्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
इटालीका संक्रामक रोग विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले विश्व महामारीको रूपमा देखिएको कोरोना भाइरस भ्याक्सिनविना नै निस्कृय बन्न सक्ने बताएका छन् । कोरोना भाइरस पछिल्ला दिनमा कमजोर बन्दै गएकाले भ्याक्सिनविना नै यो सकिने उनीहरूको तर्क छ । यो भाइरस ‘बाघबाट जंगली बिरालो’ भएको चिकित्सकहरूलाई उद्धृत गर्दै बेलायती पत्रिका द टेलिग्राफले उल्लेख गरेको छ ।
इटालीको पोलीक्लिनीको सान मार्टिनो अस्पतालका संक्रामक रोग क्लिनिक प्रमुख प्राध्यापक म्याटियो बास्सेतीले भनेका छन्, ‘कोभिड–१९ को शक्ति कमजोर हुँदै गएको छ । अर्थात् यसले अब क्षति गराउने क्षमता गुमाइरहेको छ र पहिले संक्रमितहरू मृत्यु हुने दर धेरै थियो, अहिले निको हुनेको धेरै छ ।’
इटालीका विशेषज्ञ चिकित्सक भन्छन्, 'काेराेना भाइरस भ्याक्सिनविना नै निष्कृय बन्न सक्छ'
कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि नबल्झिने र कमजोर हुँदै जाने भएकाले यो भाइरस विरुद्धको खोप आवश्यकता नपर्न सक्ने सघन उपचारका विशेषज्ञहरूले बताएका छन् । भाइरसमा आएको आनुवांशिक परिवर्तनका कारण यो कमजोर बन्दै गएको विषय वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्टी हुन भने बाँकी छ ।
डब्लूएचओले पनि कोरोना भाइरस १४ दिनपछि निस्कृय हुने बताएको छ । यसअघि ४ हप्तासम्म भाइरस निस्कृय नहुन सक्ने बताएको डब्लूएचओले १४ दिनमै कोरोना निको हुन्छ भन्नु राहतको विषय हो ।
१४ दिनसम्ममा कोरोना भाइरस निष्कृय हुन्छ : डब्लूएचओ नेपाल प्रमुख
अमेरिका, चीन, रुसजस्ता विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सीन बनाउन खटिरहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले अबको केही महिनाभित्रै कोरोनाविरुद्ध सुरक्षित र प्रभावकारी भ्याक्सीन तयार हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
अमेरिकाले २ साता अघि नै २० लाख भ्याक्सीन बनाएको दाबी गरेको छ । यद्यपि, वैज्ञानिक प्रमाणीकरणपछि भ्याक्सीन जनस्तरमा पुर्‍याउने त्यहाँका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले बताएका छन् ।
कोरोना त्रासबाट राहत मिल्ने खालका विवरण आइरहेकाले सामाजिक एकता, सद्भावमा खलल पुग्ने खालका गतिविधि कसैले पनि नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम आग्रह गर्छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, १० असार २०७७, ०९:३४:००